what, when, why: एकछिन हासौं, मूड फ्रेस गरौं हुन्न र ??
एकछिन हासौं, मूड फ्रेस गरौं हुन्न र ??
माग्ने: साहेब २० रुपैयाँ दिनुहोस् न कफी पिउनु मन लाग्यो ।
साहेब: किन २० रुपैयाँ नि ? कफी त १० रुपैयाँ कपमै आउछ त ।
माग्ने: साहेब, साथमा girlfriend पनि छ नि त ।
साहेब: माग्ने भएर girlfriend बनाएर हिड्छौ ?
माग्ने: होइन साहेब, girlfriend ले चाँही माग्ने बनायो ।
Husband र wife कतै जादै थियो । बाटोमा एउटा गधा भेटियो ।
wife: (जिस्किदै) तिम्रो नजिकको आफन्त हो नमस्ते गर ।
Husband: नमस्ते ससुरा बा ।
सासु (बुहारी सँग रिसाउदै):
भगवानले तँलाई २ वटा आँखा दिएको छ , चामलमा २ - ४ ढुङ्गा निकाल्न सकिनौ ??
बुहारी : तपाईंलाई पनि भगवानले ३२ वटा दाँत देको छ त २ - ४ वटा चपाउन सक्नु भएन त ?
- (आफ्नो साथीको आँखा रातो रातो देखेर) हैन तिम्रो आँखा किन यस्तो रातो रातो ?
- मेरो पति बिरामी छ नि त त्यसैले ...
- अनी तिमीले त कुनै नर्स राखेको छौ रे हैन उसलाई हेरबिचार गर्न ?
- अँ, त्यसै कारण त मलाई रात भरी जाग्नु पर्छ नि ।
चिया एक सर्को मात्र पिएको हुन्छ उसले चियामा झिङगा देख्छ । हत्तन पत्त चिया गिलास पर सार्दै
ग्राहक: साहुनी, चियामा त झिङगा परेको रहेछ । म त पिउदिन है अर्को दिनुहोस् ।
साहुनी: जुठो लगाइसकेको चिया सात्तिदैन ।
ग्राहक: हैन मैले जुठो लगाको छैन ।
साहुनी: अँ ढाट्नु पर्दैन, अघी मैले चिया दिदा २ वटा झिङगा थियो ।
पति: (पत्नीलाई माया गर्दै) यदि तिमीलाई केही भयो भने त म पागल हुन्छु ।
पत्नी: (खुशी हुँदै) अर्को बिहे त गर्दैनौ नि ?
पति: अब पागलको के भरोसा, उसले त जे पनि गर्न सक्छ नि ...
शिक्षक: तिमी कलेज किन आउछौ ?
विद्यार्थी: बिद्या को लागि सर
शिक्षक: त्यसो भए तिमी आज क्लासमा किन सुतिरहेको छौ त ???
विद्यार्थी: किनकी आज बिद्या कलेज आको छैन नि त .....
एउटा तितो सत्य।।। !!!
बहिनीको साथी बहिनी हुन सक्छ
भाईको साथी भाई हुन सक्छ
दिदीको साथी दिदी हुन सक्छ
स्वास्नीको साथी स्वास्नी हुन कदापि सक्दैन ...........
डाक्टर: हजुरको पतिलाई धेरै आरामको खाँचो छ यो लिनुहोस् स्लीपिङ ट्याब्लेट
पत्नी: यो कति कति खेर दिनु पर्ने नि डाक्टर साप ??
डाक्टर: यो ट्याब्लेट उनको लागि हैन तपाईंको लागि पो त ...........
पहिलो मान्छे: बिहे पछि म लखपति बने
दोस्रो मान्छे: त्यो भन्दा पहिले हजुर के हुनु हुन्थ्यो त ?
पहिलो मान्छे: त्यो भन्दा पहिले म करोडपति थिए .........
पत्नी: हामी यो हप्ता पुरा दिन फिल्म हेर्ने अनी अर्को दिन पुरा दिन सपिङग गर्ने ल ...
पति: हुन्छ अबस्य हुन्छ ... अनी अर्को दिन चाँही पुरै दिन मन्दिर जाने नि हुन्छ ???
पत्नी: किन नि ?
पति: भिख माग्न ...
राजु: किनकी प्रश्न पनि त एउटै थियो नि त ............
शिक्षक: मनले कुनै प्राथना गर्‍यो भने तिमीहरुको इच्छ्या पुरा हुन्छ बाबुहरु..
विद्यार्थीहरु: यो सबै झुठो कुरा हो सर ...
शिक्षक: किन र ?
विद्यार्थीहरु: यदि यो साचो हुने हो भने त तपाईं अर्कै स्कुलमा सरुवा भई सक्नु हुने थियो...........
शिक्षक: गिरिजा प्रसाद कोइराला को हो ?
विद्यार्थी : थाहा छैन सर
शिक्षक: आफ्नो पढाईमा ध्यान राख्नु अनी थाहा हुन्छ ..
विद्यार्थी : बिबेक को हो सर ?
शिक्षक: थाहा छैन किन र ?
विद्यार्थी : आफ्नो छोरीमा ध्यान राख्नु अनी थाहा हुन्छ सर .......
हाहा.....धन्यबाद रमेश जी एक छिन भए नि मुड फ्रेस भो ! निकै रमाइला चुट्किलाहरु रहेछन !
Wah Wah Kya Jhakash Jocks Rahe6 Thanks Bro frei feri yesto Jocks upload Gardai garnoo la
Krishna shrestha said...
o whatajoks....i enjoy very much nn hase ra ahelea samma mero6pak ko cord cord dukhi ra ko 6.......Thanksalot
nice jokes....keep uploading
ललित कुँवर said...
Im enjoying Ramesha dai very nice jokes.Thank's Dai.
whatajock i love him all jocks
1 dama ramailo gagyo